सेवाग्राहीको सन्तुष्टि नै ट्रेण्डीको पहिलो लक्ष्य : सञ्चालक पाण्डेय - Rajmarg Online
सेवाग्राहीको सन्तुष्टि नै ट्रेण्डीको पहिलो लक्ष्य : सञ्चालक पाण्डेय
ट्रेण्डी वेयर, उमेशमार्ग घोराही १५, दाङ
ट्रेण्डी वेयरको जन्म कुन उद्देश्यका साथ कहिले भयो ?
सर्वप्रथम सर्वसुलभ मूल्यमा गुणस्तरिय कपडा तथा फेन्सी सामाग्रीहरु प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ २०७७ साल कार्तिक ५ गतेबाट घोराही उपमहानगरपालिका वडा नंम्वर १५ उमेशमार्गबाट ट्रेण्डी वेयर सञ्चालनमा आएको हो ।
सञ्चालमा आएको १ वर्षभन्दा धेरै समय हुदा सेवाग्राहीहरु कत्तिको सन्तुष्ट भएको महशुस गर्नुभएको छ ?
नया नया फेशन अनुसारका गुणस्तरिय कपडा तथा फेन्सी सामाग्रीहरु सर्भसुलभ मुल्य पाउदा सेवाग्राहीहरुलाई धेरै हदसम्म सन्तुष्टि दिन सफल भएको महशुुस हामीले गरेका छौँ । त्यसैको फलस्वरुप हुन सक्छ, हाम्रा ग्राहकहरु एक पटक समाग्री खरिद गरिसकेपछि फर्कि फर्कि आउने गर्नु भएको छ ।
ट्रेण्डी वेयरले व्यवसायिक हितसँगै सेवाग्राहीको हितलाई प्राथमिकता दिएको छ । हामी व्यवसायबाट सफल हुने आधार भनेकै सेवाग्राहीलाई सन्तुष्टी प्रदान गर्दै आफु सन्तुष्ट हुनु पर्ने भएकाले सेवाग्राहीको सन्तुष्टि नै ट्रेण्डीको पहिलो दायित्व हो । हामीले सेवाग्राहीले खोजेअनुसारको ईन्डियन, बंगलादेश, चाईनिज र स्वादेशी ब्राण्डका सामाग्री प्रदान गर्दै उपभोक्ताको मन जित्न सफल भएको महशुस ट्रेण्डी वेयरले गरेको छ ।
ट्रेण्डी वेयरका लक्षित वर्गहरु कस्ता व्यक्तिहरु हुन् ?
ट्रेण्डी वेयर यथार्थमा उपभोक्ता मैत्री फेन्सी सामाग्री विक्री गर्ने पसल हो । हामीले महिला, पुरुष, बालबालिका, बृद्धाबृद्धलाई लक्षित गरेर सबै खालका फेन्सी सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउदै आएका छौ । हाम्रो लक्ष्ति वर्ग वास्तवमा आव उपभोक्ताहरु सबै हुन् । बच्चादेखी बृद्धसम्म सबैलाई आवश्यक पर्ने सामाग्रीको विक्री वितरण हामीले प्रदान गरिरहेका छौ ।
गुणस्तरियता नै हाम्रो पहिचान हो । जिल्लाका सबै व्यवसायीले आयात गर्नेभन्दा हामीले आयात र विक्री गर्ने सामाग्रीमा क्वानटिटीमा नभाई क्वालेटिमा ध्यान दिने गरेका छौँ । अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा गुणस्तरयुक्त कपडाको खोजीमा हुने उपभोक्ता हाम्रो लक्षित वर्ग हुन् । त्यसैले गुणस्तरिय कपडाको खोजीमा हुने जो कोही आखा चिम्लेरै ट्रेण्डी वेयरमा आए हुन्छ ।
गुणस्तरिय कपडामात्रै आयात र विक्री गर्छौ, भनिरहदा मंहगो पनि त त्यस्तै होला नि ?
बंगलादेश, चिन, भारत वा भनौ स्वदेशमै तयार भएका पनि गुणस्तरिय सामाग्री मात्रै विक्री गर्दा थोरै केही धेरै मुल्य पर्नु स्वभाविक पनि हो । तर पनि ट्रेण्डी वेयरले खरिद गरेको मुल्यमा एक्दमै थोरैमात्र मार्जिन रोखेर उपभोक्तालाई सर्वसुलभ मुल्यमा विक्री गर्र्दै आएको छ । हाम्रा सेवाग्राही ट्रेण्डी वेयरसँग खुशी हुने एउटा दरिलो आधार यो पनि हो ।
ट्रेण्डी वेयर सञ्चालनमा आएदेखी अहिलेसम्म तपाईको व्यवसायिक अनुभव कस्तो छ ?
पहिलो चरणको लकडाउन सकिएपछि ट्रेण्डी वेयर सञ्चालनमा आयो । व्यवसाय सञ्चालनमा आएको छोटो समय ६ महिनामै दोस्रो चरणको लकडाउन भयो । जसको प्रत्यक्ष मार ट्रेण्डी वेयरले पनि व्यहोर्नु प¥यो ।
पसलमा भएका सामानहरु लकडाउनका कारण विक्री गर्न सकिएन भने नयाँ सामानहरु आयात गर्न पनि निकै कठिन भयो । सामान आयात गर्दा गोदामदेखी लिएर ढुवानीसम्म सबै कुरामा मंहगो भयो । बन्दाबन्दिकै समयमा पनि बैंकको ब्याज तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
आयश्रोत शुन्य भएपनि व्यवसाय सञ्चालनका लागी बैंकबाट ऋण ल्याएको ६५ लाखको ब्याज तिर्नै बाध्यताले झनै समस्या बनाएको थियो । व्यवसायबाट म सन्तुष्ट भएपनि कोरोना महामारीका कारण थला परेको व्यवसायबाट फेरी माथि उठ्ने प्रेरणा मिलेको छ । छोटो समयमै महामारीले असफलताको थोरै अनुभव पनि राम्रैसँग मिलेको छ । यसले हार मान्ने नभई ठक्कर खाई पुनः व्यवसायलाई चलायमान बनाउदै सञ्चालन गर्दै आगमाी दिनमा पनि ग्राहक वर्गलाई सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य बनाएका छौँ ।
ट्रेण्डी वेयर कोरोना महामारीपछि पुरानै अवस्थामा फर्किएको हो ?
कोरोना भाईरसको मारमा परेका अधिकांश क्षेत्र चलायमान हुदै गर्दा ट्रेण्डी वेयर पनि पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ । त्यो बेलाभन्दा पनि पछिल्लो समय उपभोक्ताको आक्रषण झनै बढ्दो देखिएको छ । हामीले उपभोक्तालाई विशेष छुटका साथ सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ बेलाबेलामा शेल समेत लागाउने गर्छौ ।
फेन्सी व्यवसायमा व्यवसायीक प्रतिस्पर्धा कस्तो छ ?
फेन्सी व्यवसयमा अस्वस्थकर प्रतिस्पर्धा मैले धेरै देखेको छु । एउटै मुल्य नभई पसलअनुसार फरक फरक मुल्य निर्धारण गर्ने जस्ता समस्या छन् । अर्काे तिर गुणस्तरिय ब्राण्डका कपाडाको जस्तै प्रतिलिपीका कपडाहरु बजारमा भित्राई सस्तो मुल्यमा विक्री वितरण गर्ने खालको नराम्रो संस्कार पनि मौलाउदै गएको देखिन्छ । यस्ता व्यवसायीहरुका कारण पनि गुणस्तरिय कपडा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालनमा आएका हामी जस्ता व्यापारीहरुलाई केही समस्या हुने गरेको छ ।
अन्त्यमा केही छ भने ?
ट्रेण्डी वेयरलाई गुणस्तरिय कपडाको एउटा ब्राण्डका रुपमा दाङमा चिनाउने मेरो योजना छ । त्यसमा मलाई उपभोक्ताहरुको साथ र सहयोगको धेरै आवश्यक पर्छ । त्यो मैले धेरैहदसम्म प्राप्त गरिरहेको छु । सबै ग्राहकमा नमन र सम्झना गर्न चाहान्छु । अर्काेतिर व्यवसायीविच निकै प्रतिस्पर्धा भएकाले नयाँ फेन्सी ब्यवसाय गर्न चाहानेहरुलाई धेरै सोच विचार गरेर यस व्यवसायमा प्रवेश गर्नुहुन मेरो सुझाव छ ।
समय र संवादका लागी धेरै धेरै धन्यवाद ।
राजमार्ग अनलाईन टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद ।
Prevकर्णालीमा ६ महिनायता सवारी दुर्घटनामा १ सय १८ जनाको मृत्यु
Nextअटरीले सीमा नाघ्यो : मुखमा होइन, खल्तीमा मास्क